Naya Drishti | संकटमा एमाले : धमलाको कार्यक्रममा रामकुमारी झाँक्री किन रोइन ? - Naya Drishti संकटमा एमाले : धमलाको कार्यक्रममा रामकुमारी झाँक्री किन रोइन ? - Naya Drishti
बैशाख २६, काठमाडौं । नेकपा (एमाले) की नेतृ तथा सांसद रामकुमारी झाक्री प्राइम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग रुदै अन्तरवार्ता दिएकि छन् । रामकुमारी झाँक्रीले पार्टीमा फर्किएर काम गर्ने ढोका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बन्द गरिदिएकोले अब सँगै रहने सम्भावना नरहेको बताएकी छिन् ।
प्राइम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेतृ झाँक्रीले भनिन्, ‘आज हाम्रो लागि एकदमै टफ दिन हो, अलिकति संवेदनशील दिन पनि हो । हामी जे गर्न गैरहेका छौं, राजनीतिमा एउटा अध्याय सकेर एउटा नयाँ बाटो लाग्दैछौं । त्यो कारणले स्वाभावैले हाम्रा सबै सांसदहरुले जसरी कुरा राख्नुभयो, अलिक बढ्दा भावुकता, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उहाँको सुविधाको लागि पार्टी एकता गर्नुभयो, र पार्टी विघटन पनि उहाँले गर्नुभयो ।’
ओलीले अदालतमा सेटिङ गरेरै पार्टी विघटन गरेकाे उनले बताइन् । ‘त्यो सेटिङपछि अदालतले पूर्ववतः अवस्थामा भनिसकेपछि २०७५ साल जेठको २ गते अघिको कण्डिसन हो, एमालेको । त्यही अवस्थामा फर्किएर हामी काम गर्छौं भनेर हामीले उदारतापूर्वक भनिरहँदा उहाँले हामीलाई ढोका बन्द गर्नुभयो । त्यो ढोका उहाँले आजपनि बन्द गर्नुभएको छ ।’ उनले भनिन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्ति व्यक्तिसँग डिल गरिरहेकाे तथा लोकतन्त्र र संविधान अनि कानूनको धज्जी उडाउने काम गरेकाे उनकाे आराेप छ ।
उनले रुँदै भनिन्, ‘अब हामी एमाले भैरहने र त्यही पार्टीमा अन्तरसंघर्ष गर्ने अवस्था रहेन् । त्यो रहिनसकेपछि हाम्रा लागि अन्तिम दिन पनि हो नेकपा एमालेको दलको बैठक भनेर बस्ने । त्यो कारणले स्वभावैले स्मृतिका लामा, हामीले गरेका दुःख, यात्रा सम्झना छ ।’
उनले थपिन्, ‘यत्रो लामो बाटो हिँडेर यहाँ आयौ नि त । हाम्रा पनि कुराहरु छन् नि । अझैपनि एउटा अध्यक्षले उदारतापूर्वक स्पेश दिनुपर्छ, र भोलि विहान ९ बजेसम्म पर्खिएर भएपनि पार्टी विभाजन नहोस भन्न चाहन्छौं ।’
नेकपा (एमाले) नेपाल–खनाल समूहले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नो समूहको माग सम्बोधनका लागि सोमबार बिहान साढे नौ बजेसम्मको ‘अल्टिमेटम’ दिएको छ।
आइतबार बसेको नेपाल–खनाल समूहको बैठकले सोमबार बिहान साढे नौ बजेसम्मको समयसीमा दिएको उक्त समूहका नेता योगेश भट्टराईले बैठकपछि जानकारी दिएका थिए ।
उक्त समयसम्म पनि मागको सुनुवाइ नभए आफूहरु प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा मतदान गर्न नसक्ने उनले संकेत गरेका थिए ।
आफूहरुका दुईवटा माग पार्टी ‘एकतापूर्व २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्किने’ र ‘सहमतिका साथ अघि बढ्ने’ अवस्थामा संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन आफूहरु तयार रहेको उनले बताएका थिए । उनले भने, ‘सांसदहरुलाई भोलि बिहान साढे नौ बजे संसद सचिवालयमा बोलाएका छौँ। त्यतिबेलासम्म हामी पर्खिन्छौँ। त्यसपछि निर्णय लिन्छौँ।’
तर हालसम्म एकताको लागि कुनै ठोस प्रगति भएको छैन ।
हेर्नुहाेस् पत्रकार ऋषि धमलासँग झाँक्रीले दिएकाे अन्तर्वार्ता
एमाले नेतृ तथा सांसद रामकुमारी झाँक्रीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिइन यस्तो चेतावनी
राजनीति लेनदेनको मामला होइन भन्दै झाक्रीले लेखिन : ‘जुनसुकै जोखिम उठाउन तयार हुनुपर्छ’